'Hawaasni idil-addunyaa ummanni qe'ee isaarraa osoo buqqa'aa jiru callise' - Naannoo Amaaraa - ETHIOPIANS TODAY
Lola bakkeewwan naannoo Amaaraa Tigraay daangeessutti adeemaa jiruun rakkoo dhaqqabaa jiru hawaasni idil – addunyaa osoo dhagahuu callisuu filateera jechuun qondaalli olaanaa Naannoo Amaaraa himan.
Pireezidantiin Itti-aanaa Naannoo Amaaraa Dr Fantaa Maandafiroo yeroo ammaa naannicha keessatti kan dhihoo baqatan dabalatee baqattoonni miiliyoona tokko ol akka jiran himaniiru.
Ta’us, xiyyeeffannoo walqixxee kennaa hin jirani jechuun hawaasa idil-addunyaa fi miidiyaawwan logummaan himatan.
BBC’n Dr Fantaa Maandafiroo waliin dhimmoota wayitawaa irratti turtii taasiseera.
Gaaffiifi deebiin kuni torban darbe waajjirri MM Abiy Ahimad ”humnoonni nageenyaa humnoota TPLF irratti tarkaanfii akka fudhatan tarkaanfiin ka’ameera” jechuun ibsuu isaa dura kan taasifamedha.
BBC: Lolli adda waraanaa meeqaan adeemsifamaa jira?
Dr Fantaa: Waraanni kuni daangaa Naannoon Amaaraa Naannoo Tigraay daangessurra, bakkeewwan tokko tokkottimmoo daangaa Naannoo Amaaraa keessa seenuun taasifamaa jira.
Karaa Kaabaa Xallamtii eegalee hanga daangaa Affaaritti itti fufeera. Lafa kiloomeetira dhibba hedduu bal’atuurra waraanni adeemaa jira.
BBC: Haala lolichi itti jiru akkamiin ibsitu?
Dr Fantaa: TPLF weerara guutuu nurratti bane. Adda hundaan labsii dhukaasa dhaabuu gam-tokkee labsame faallaatti haleellaa raawwataa jira.
Lammiileen baay’ee guyyaa guyyaan walitti bu’insaafi ajjeechaa irraa miliquuf baqataa jiru.
BBC: Amma lolli akka jiru nutti himtaniittu. Kanaaf labsiin dhukaasa dhaabuu jira jechuu dandeenyaa?
Dr Fantaa: Jalqaba mootummaan labsiin dhukaasa dhaabu taasise gam-tokkeedha. Garuu, TPLF itti fufinsaan haleellaa fi dhumaatii raawwataa jira. Labsiin dhukaasa dhabuu kabajamuu qaba ture.
Kanaaf, mootummaan hojii ofirraa ittisuu hojjetaa jira. Lammiilee keenyarraa haleellaa ittisaa jirra.
BBC: Adeemsi kuni yoo itti fufe wanti jijjiiramu jiraa laata? TPLF waliin marii taa’uf?
Dr Fantaa: Jijjiiramni akka dhufu kan eegnu TPLF irraati. Labsii dhukaasa dhaabuu kabajuu qaba. Mari’achuufillee jalqaba labsiin dhukaasa dhaabuu kabajamee nagaan bu’uu qaba.
Namoonni osoo ajjeefamaniifi dhumaatiin irratti raawwataa jiruu garuu kuni ta’u hin danda’u.
Yeroo ammaa haadholiin rooba keessa dahaa jiru. Kanaaf, akka naaf galu miidiyaan akka keessan dabalatee kanneen sagalee dhabaniif sagalee ta’u qabu. Garuu, kana argaa hin jirru. Kuni, baay’ee nama gaddisiisa.
Osoo amma dubbataa jirruu lammiileen itti fufinsaan qe’eerraa buqqa’aa jiru. Buqqaatota miiliyoona 1.2 ol kessummeessaa jirra. Lola hammaateen lammiileen 200,000 ol qe’ee isaaniirraa buqqa’aniiru.
Kanaaf, mariillee taasisuuf karaan jalqabaafi tokkichi labsii dhukaasa dhaabuu labsame kabajuudha.
BBC: TPLF haaldureen kaa’e osoo hin guutamiin dhukaasa akka hin dhaabne himeera. Isin kanaaf deebiin keessan maali?
Dr Fantaa: Lammiileen osoo ajjeefamaafi buqqa’aa jiranii callisnee dhukaasa akka dhaabnu kan yaaddu nutti hin fakkaatu. Falli tokkichi jalqaba haalduree tokko malee labsii dhukaasa dhaabuu fudhachuu qabu.
BBC: Lammiileen 200,000 ol akka buqqa’an nutti himtaniittu. Deeggarsi akkamii taasifamaafi jira?
Dr Fantaa: Dhaabbilee deeggarsa namoomaa waliin mari’ataa jirra. Kanneen buqqa’aniif dhaabbileen deeggarsaa xiyyeeffannoo walqixaa kennaa hin jirani.
Loogiin deeggarsa namoomaa argaa jiru isan barsiisaa tureefi beekumsa qabun faallaadha.
Buqqaatonni Naannoo Amaaraa deeggarsa namoomaa gahaafi barbaachisaa ta’e argataa hin jiran. Deeggarsi gahaa jiru gahaa miti.
Dhaabbilee deeggarsaa waliin mari’annee dhiheessiin loogii akka qabu itti himneerra. Garuu, hanga yoonaa homaa wanti jijjiirame hin jiru. Akka sirratu gaafataa jirra.
BBC: Dargaggoon hedduu humna addaa Amaaraa yookiin Raayyaa Ittisa Biyyaa seenaa jiru. Lakkoofsaan meeqa ta’u? Kunoo, lolicha irratti jijjiirama maal fida?
Dr Fantaa: Kan waamicha taasifne ummanni hundu akka ofirraa ittisuufi. Kuni waamicha ofirraa ittisuu malee haleellaa kaanirratti baname miti. Lammiilee tokko tokkoof waamicha waan taasifneef lakkoofsaan ibsuun ni rakkisa. Tarii, miiliyoonotaan ta’u danda’a.
BBC: Hawaasi idil – addunyaa keessumaa Ameerikaan humni addaa Amaaraa naannawa Amaaraafi Tigraay gama Lixaan daangessu [Walqaayit Xagadee] keessaa akka bahu jedhaniiru. Deebiin keessan maali?
Dr Fantaa: Bakka sana humni addaa Amaaraa wanti jedhamu hin jiru. Kanneen jiran Raayyaa Ittisa Biyyaa Federaalaafi humna addaa Amaaraa dabalatee humna addaa naannolee hundatu jira.
Humni bakka hundatti ramadame immoo kan hoogganamu mootummaa federaalaani.
BBC: Waraanni kuni ijoo dubbii ta’e itti fufeera. Keessumaa himannaan garaagaraa waan dhihaatanif dhimma kana irratti hawaasa idil -addunyaaf kan jettan qabduu?
Dr Fantaa: Ergaan hawaasa idil – addunyaaf qabu lammiilee nagaa qaama waraanichaa osoo hin ta’in miidhamaniif deeggarsa namoomaa dhiheessuu qabu.
Sagalee qaama tokko qofa dhageessisuun hammeessuu caalaa yaada qaamolee hundaa dhagahuun barbaachisaadha.
Mootummaan federaalaafi naannoo Amaaraa dhagahamuu qabu. Wanti walitti bu’iinsa irraa argamu hin jiru.
Kanaaf, hawaasni idil – addunyaa qaama waraanaa tokko qofa dhagahuun Itoophiyaa bira dhaabbachuu hin danda’u.
Gidduu dhaabachuu qabu. Kanneen sagaleen isaanii hin dhaggeeffatamneef sagalee ta’un barbaachisaadha.
Hawaasni idil-addunyaa waa’ee dhumaatii Maayikaadiraa waan dubbate hin qabu. Kuni, akka namaatti baay’ee gaddisiisaadha. Haleellaa TPLF’n osoo dhumanii jiranii callisuun mufachiisaadha.
Kaaba Walloo, Kaaba Gondar, Waagihimraa fi Naannoo Affaariiti lammiilee buqqa’aniif wanta dubbatan hin qabani.
Kuni maal jechuudha? Dhuguma Itoophiyaaf yoo dhiphatu ta’e ibsa kennan irratti of eeggannoo gochuu qabu.
Takka takka hawaasa idil – addunyaafi miidiyaalee idil – addunyaan wanti ibsamu baay’ee nama gaddisiisu. Sababni isaas osoo hin qulqulleeffatiiin dubbatu. Kuni warra miidhamaniif miidhaa biraadha.
BBC: Ummanni miiliyoona 1.2 eessaa buqqa’ani?
Dr Fantaa: Baatii Guraandhala darbe akkasumas Bitootessa keessa walitti bu’iinsa Shawaa Kaabaafi Godina Addaa Saba Oromootti ka’en hedduun buqqa’aniiru.
Lammiileen bakkeewwan biyyattii garaagaraatti buqqa’animmoo Bahaafi Lixa Goojjam, Kibba Gondar, Kaabaafi Kibba Wallootti argamu.
Wanti nama gaddisiisu garuu hawaasni addunyaa lammiilee kanaaf sagalee ta’e hinbeeku.
BBC: Naannawa Walqaayit dhalattoonni Tigraay buqqa’aniiru. Haleellaanis irratti dhaqqabeera. Keessumaa himannaa reeffi isaanii bishaan Takazee keessa gatameera jedhuf deebiin keessan maali?
Dr Fantaa: Diraamaa akkanaafi bu’aa siyaasaaf jecha lammiilee isaa ajjeesuun TPLF haalaan kan beekamuufi leenjii isaas kan qabudha. Sababa kanaaf, diraamaa isaa keessaa tokko akka ta’ettin shakka.
BBC: Lolli kuni erga eegalee ji’a sagal ta’aa jira. Damee hedduurratti dhiibbaa qaba ture. Adeemsi lolli kuni yeroo gabaabaa keessatti goolabamuu danda’u jira jettanii amantuu?
Dr Fantaa: Maaliif falli hin jiru? Addunyaarratti kan hin danda’amne hin jiru. Akka hin danda’mne kan goonu kan lola keessa qooda fudhannudha.
Hawaasni idil – addunyaa mootummaa Itoophiyaa waliin itti dhiheenyaan yoo hojjeteefi TPLF filmaata nagaa akka hordofu yoo gaafate sababni itti hin furamneef hin jiru.
Suni ta’u ta’u kan danda’u hawaasni idil – addunyaa mootummaa Itoophiyaa yoo gargaareefi humna danda’aniin TPLF irratti dhiibbaa uumuu yoo danda’anidha.
Jalqaba TPLF lola Amaaraa, Affaariifi lammiilee Itoophiyaa hundarratti labse dhaabuu qaba. Itoophiyaa diiguuf waan hunda goona jechuun ifatti dubbataa jiru.
Hawaasni idil-addunyaa garuu kana osoo dhagahuu callisuu filateera. Rakkina kana keessaa bahuuf daandiin sirrii dhugaa qofaadha.
BBC: TPLF yeroo dhihootti labsii dhukaasa dhaabuu fudhatee gara marii dhufa jettanii yaadduu?
Dr Fantaa: Isaan bakka bu’e dubbachuu hin danda’u. TPLF yeroo yerootti yaada isaa jijjiira. Kuni dhimma isaaniiti.
BBC: TPLF lola yoo itti fufe maal gootu?
Dr Fantaa: Filmaanni takkittiin qabnu lola ummata keenyarratti baname ittisuu itti fufuudha. TPLF Itoophiyaa hamga jigsutti hanga Si’ool akka deemu nutti himeera. Kana callifnee hin ilaallu.
Balaa lolaa Finfinnee Seminaarii Makkaane Yesuusitti dhaqqabeen namoonni torba du’anii tokko ammayyuu hin argamne